Fahad Yaasiin oo kulan xasaasi ah la yeeshay Guudlaawe maxay ka wada hadleen?? | Arrimaha Bulshada
Home News Fahad Yaasiin oo kulan xasaasi ah la yeeshay Guudlaawe maxay ka wada hadleen??
Fahad Yaasiin oo kulan xasaasi ah la yeeshay Guudlaawe maxay ka wada hadleen??
Bulsha:- Fahad Yaasiin ayaa kulan socdey ilaa afar saacadood kula qaatey saakay Decale Airport Hotel kula yeeshay Madaxweynaha maamulka HirShabeelle Cali Guudlaawe.
Macluumaadka ay heshay warbaahinta ayaa tibaaxaya in kulan uu dhacay kahor inta uusan Guudlaawe maanta u ambabixin magaaladda Jowhar, ee Caasimadda maamulka uu hogaamiyo ee HirShabeelle.
Arrimaha Fahad kala hadlay Guudlaawe waxaa kamid ah Kursiga Gollaha Shacabka ee uu doonayo inuu ku fariistay, kaasoo degaan doorashadiisu tahay Beledweyne, oo katirsan maamulka HirShabeelle .